Su'aal: Marba marka ka si danbay sana waan si caatobayaa?
Author Topic: Su'aal: Marba marka ka si danbay sana waan si caatobayaa? (Read 1884 times)
« on: April 27, 2016, 11:08:41 PM »
Asc dr waxaan raba inaan sual kuwaydiyo waxaan ahay gabar quracata qadaysa cashaysan wax walbo iga hor yimadana waan cunaa wax xanuun aho lataaban karaa na ma qabo marba marka ka si danbay sana waan si caatobayaa ma hormkayga qaldan mise wax kala jira jirkaygana wax kusiyadayaana majirto ?
Re: Su'aal: Marba marka ka si danbay sana waan si caatobayaa?
« Reply #1 on: May 20, 2016, 09:20:26 PM »
Waxba inaysan kaa qaldanayn ayaa dhici kara, dadka qaar ayaa sidaa ah, waxaana la dhahaa, waxaa aad u badan sida jirkooda u isticmaalo tamarta, way dhici kartaa cilald hormoonada la xiriirto, haddii aad shakisan tahay, la xiriir dhakhtar.
Views: 36862 April 15, 2018, 02:30:28 PM
Views: 24229 January 16, 2010, 06:58:51 PM
Views: 14049 April 08, 2011, 08:37:51 PM
Views: 10149 November 01, 2011, 07:58:14 PM